Shiinaha Gelatin warshad Softgel iyo alaab-qeybiyeyaal | Gelken
Gelatin dawooyinka waa sheyga ceyriinka ugu weyn ee kaabsoolka, microcapsule, plasma bedel ah iyo isbuunyo.
Kaabsal jilicsan waa nooc ka mid ah diyaarinta adag ee afka. Sababtoo ah waxay dabooli kartaa urta xun ee ku jirta waxyaabaha ku jira, waxay bukaanada u sahli kartaa aqbalitaankooda, waxayna hagaajineysaa u hogaansanaanta bukaanada daawooyinka, oo si fudud loo liqi karo. Tan iyo markii ay dhalatay, waxay noqotay qaabka qiyaasta daawada ee warshadaha dawooyinka. Waqtigaan la joogo, 600 bilyan oo kaabsal gelatin ah ayaa la soo saaraa sanad walba, taas oo ah, 20000 oo kaabsol ayaa la soo saaraa ilbidhiqsi kasta oo la galiyaa suuqa. Sababta sababta kaabsalka gelatin uu caan u yahay wuxuu xiriir dhow la leeyahay waxqabadkiisa farsamo ee aadka u wanaagsan
Kaabsalka jilicsan ee 'Gelatin' wuxuu go'doomin karaa oksijiinta, wuxuu leeyahay caabbinta qoyaan wanaagsan, wuxuuna si wax ku ool ah u hagaajin karaa xasilloonida waxyaabaha;
Kaabayaasha jilicsan ee 'Gelatin' ayaa si dhakhso leh u kala bixi kara, sii deyn kara qaybaha firfircoon iyo hagaajinta bioavailability ka dib maamulka afka.
Waxyaabahani waxay xaqiijinayaan badbaadada iyo waxtarka qaadashada maaddada firfircoon, waxayna hubisaa caafimaadka dadka iyo badbaadadooda. milmi fiican gelatin, guryaha film la xirrira, thermo guryaha gel karo iyo sifooyinka processing fudud yihiin dhammaan guryaha irreversibly functional of gelatin ee wax soo saarka kaabsal.
Gelken waxay siisaa gelatin kaabsal jilicsan warshadaha dawooyinka sanado badan. Waxaan inta badan diirada saarnaa nolosha badbaadada dadka.
Shuruudaha Imtixaanka Pharm Shiinaha PharmacopoeiaDaabacaadda 2015 Wixii Kaabsal jilicsan
1. Xoog Jelly (6.67%) 140-200bloom
2. Viscosity (6.67% 60 ℃) 30-40mps
4. Qoyaanka ≤12%
5. dambas (650 ℃) ≤2.0%
6. Daahfurnaan (5%, 40 ° C) mm ≥500mm
10. Gudbinta 450nm ≥70%
11. Gudbinta 620nm ≥90%
12. Arsenic .0000.0001%
13. Chrome Pp2ppm
14. Bir culus Pp30ppm
15. SO2 Pp30ppm
16. Maaddada aan milmi karin ee biyaha ku jirta ≤0.1%
17 .Tirinta Bakteeriyada Guud ≤10 cfu / g
18. Escherichia coli Xun / 25g
19. Salmonella Xun / 25g
Hore: Gelatin loogu talagalay Kaabsoosha adag
Xiga: Gelatin looxa